वाह ! यस्तो पो सामुदायिक विद्यालय, जहां पढ्न पाउँदा विद्यार्थीले आफ्नो भाग्य ठान्छन् – PathivaraOnline
Home > समाचार > वाह ! यस्तो पो सामुदायिक विद्यालय, जहां पढ्न पाउँदा विद्यार्थीले आफ्नो भाग्य ठान्छन्
बुटवल, ७ बैशाख । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी जुटाउन हम्मे हम्मे पर्ने अवस्था कतिपय विद्यालयहरुमा अझै पनि रहेको छ । कतिपय सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरु पढ्दा उत्कृष्ट हुन सक्दैनन भन्ने अभिभावकहरुको पनि बुझाई हुन्छ । तर रुपन्देहीमा केही त्यस्ता विद्यालयहरु छन जसले सरकारी विद्यालयको आभास नै दिलाउँदैनन । निजीलाई टक्कर दिने शिक्षा दिन्छन ।
बुटवलको कालिकानगरमा रहेको कालिका मानवज्ञान, देविनगरमा रहेको नविन औद्योगिक कदर बहादुर रिता माध्यमिक विद्यालय, हाटबजारमा रहेको कान्ति माध्यमिक विद्यालय र मणिग्राम रुपन्देहीमा रहेको शान्ती नमुना विद्यालय त्यसका उदाहरणहरु हुन ।
अहिले भर्ना कार्यक्रम सुरु भइरहदा यी विद्यालयहरुमा भर्ना हुन आउनेको संख्या सयौ होईन हजारौको संख्यामा रहेको छ । कालिका मानवज्ञान माध्यमिक विद्यालयमा यस बर्ष ३ हजार १ सय ४३ जना विद्यार्थीहरुले प्रवेश परिक्षामा सहभागि भएका छन । यो संख्याले पनि विद्यार्थीहरुको सामुदायिक विद्यालयमा रहेको आर्कषण पुष्टि गर्ने गर्दछ । “हामीले अत्याधिक भिडको व्यवस्थापन गर्दै ३ हजार बढिको ईन्ट्रास लिएका छौ”, कालिका मानवज्ञान माविका प्राचार्य धनश्याम पाठकले भने ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकहरुको लगनशिलताकै कारण विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको आर्कषण बढेको उनको भनाई
छ । वैशाख ८ गते नजिता सार्वजजिक गर्ने, ९ गते भर्ना दिने र र १० गतेदेखि कक्षा संचालन गर्ने तयारी कालिका मानवज्ञान माविको रहेको छ । विद्यालयमा अहिले नै ४ हजार ३९७ विद्यार्थी छन् । नयाँ भर्नापछि ५ हजार ५ सय पुग्छ ।
त्यसैगरी देविनगरमा रहेको नविन औद्योगिक कदर बहादुर रिता माध्यमिक विद्यालयमा यस बर्ष ईन्ट्रासमा ९ सय ६१ विद्यार्थीहरु सहभागि भएको विद्यालयका प्राचार्य प्रेम बहादुर बस्नेतले भने । “हामीले ९ सय ६१ विद्यार्थीबाट बढिमा २ सय ४० विद्यार्थी ल्याउन सक्ने स्थिती छ”, उनले भने । ईन्जिनियरको समेत पढाईहुने उक्त विद्यालयमा आईतबार प्रवेश परीक्षा हुँदै छ । १७ सय विद्यार्थीहरु रहेको विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यम बाट अध्ययापन हुने गर्दछ । त्यसैगरी कान्ति मावि र शान्ति माविमा पनि विद्यार्थीहरुको आर्कषण बढ्दै गएको छ ।
भर्खरै स्यांग्जा बाट आयो पत्याउनै नसकिने यस्तो खबर , कारण थाहा पाएर पर्नु हुन्छ चकित
बाझी भनिएकी आमाको कोखबाट ११ वर्षपछि जन्मिए तीन सन्तान (भिडियो हेर्नुस्)
सुनसरीमा हायस गाडीले र मोटरसाइकललाई दियो ठ क्क र, ३ जनाको मृ त्यु